इन्द्रबहादुर राईको निधनमा शोक समवेदना अनि श्रद्धाञ्जली - खबरम्यागजिन
इन्द्रबहादुर राईको निधनमा शोक समवेदना अनि श्रद्धाञ्जली
March 7, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि
खरसाङः नेपाली साहित्यको युगपुरुष डा. इन्द्रबहादुर राईको निधनमा खरसाङ क्षेत्रका साहित्यिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले शोक समवेदनासहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। अखिल भारतीय किराँती खम्बु राई सङ्गठनको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकित परिवारमा शोक समवेदना प्रकट गरेको छ।
सङ्गठनका सभापति दिलिपकुमार राईको अध्यक्षतामा खरसाङस्थित कार्यालयमा शोकसभा आयोजना गरी नेपाली साहित्यका युगपुरुष डा. इन्द्रबहादुर राईको निधनमा गहिरो शोक समवेदना प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। केन्द्रीय समितिका संयोजक सुबु राईले वरिष्ठ साहित्यकार डा. इन्द्रबहादुर राईको निधनले नेपाली साहित्यमा ठूलो क्षति भएको बताउँदै उनी सबैको युगपुरुष अनि राईहरूको गौरव थिए भनी बताएका छन्।
सभामा सङ्गठनको पक्षमा भारतीय नेपाली साहित्यको फेलो साहित्यकार असीत राईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन्। सभामा प्रेमकुमार राई, बिजय राई, दिपेन राई, सरल राई, कुमारी राई, नाम्चुङ खम्बु, रोबर्ट राई पनि उपस्थित थिए।
साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको निधनमा नेपाली भाषा परामर्श समितिका पूर्व संयोजक एवं वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम प्रधानले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकित परिवारमा शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्।
उनले लेखक मरे पनि उनीहरूको कामहरू सदैव जीवित रहने बताउँदै डा. इन्द्रबहादुर राईले नेपाली साहित्यमा गरेको काम र योगदानको सदैव जीवित रहने पनि बताए। त्यसरी नै खरसाङको साहित्यिक समूह टेबल टोलीको पक्षमा कवि-गीतकार बालकृष्ण थामीले पनि युगपुरुष डा. इन्द्रबहादुर राईको निधनमा गहिरो शोक समवेदना प्रकट गर्दै उनको निधनले नेपाली साहित्यमा ठूलो क्षति भएको बताएका छन्।
पोख्रेबुङ: नेपाली साहित्यका शिखर पुरूष डा. इन्द्रबहादुर राईको निधनमा गहिरो शोक प्रकट गर्दै पोख्रेबुङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले शोक सभा आयोजना गऱ्यो। प्रधानाध्यपक प्रमोद राईको अध्यक्षतामा भाषा-साहित्य विभागीय शिक्षक मोहन प्रधानले सञ्चालन गरेको सभामा सम्पूर्ण शिक्षण-अशिक्षण कर्मचारी अनि विद्यार्थीवर्गको उपस्थिति रहेको थियो।
दिवङ्गत आत्माशान्तिको कामनामा मौन धारणबाट शुरू भएको सभामा बोल्दै वक्ताहरूले जातिको अभिभावक मानिएका डा. राईको निधनले नेपाली भाषा साहित्यसितै समग्र समाज नै मर्माहत बनेको बताए। नेपाली समाजका ध्रूवतारा अस्ताएको ठहर गर्दै तिनीहरूले साँच्चै एउटा युगको अन्त्य भएको बताए।